Duplicate Finder, bvisa zvakapetwa mafaira nekukurumidza uye nyore | Ndinobva mac
Kana Mac yedu ikatanga kutiratidza, kasingaperi, meseji inofadza yatinofanira kufunga nezvekuchenesa hard drive yedu, nekuti iri kuda kuzara zvizere, kazhinji, tinogona kuwana ziya rinotonhora kubva mumutsipa sezvo nguva yaswedera tinofanirwa kuita yekuchenesa hongu kana hongu.
Ino nguva, sekutonga, uye kana tisina rakakodzera faira kurongeka, zvinogona kutitorera maawa mazhinji. Kana, kune rumwe rutivi, tiine mafaera ese, mifananidzo uye mavhidhiyo akanyatsorongedzwa, hazvingotitore isu chete nguva inotora kuikopa kune yekunze hard drive. Kunyange zvakadaro, Usati wagadzira iyo kopi, zvinokurudzirwa kuti utarise mafaera akanyorwa.
Duplicate mafaera idenda, iro dzimwe nguva rinogona kutora yakawanda nzvimbo pane yedu hard drive, kana isu tisina kungwarira kushandisa application kutibatsira kuti tivawane. Ino nguva isu tiri kutaura nezve Duplicate Finder, iko kunyorera kune imwe yeakanyanya kuyerwa mukushanda kwayo, chimwe chinhu chine musoro, uchifunga nezve kuti kumashure ndiko kunogadzira Trend Micro.
Duplicate Finder inotipa chakanakisa chishandiso kutarisa huwandu hwemafaira akawanikwa pane yedu hard drive, kuti titore zvinoenderana matanho. Kunyangwe chokwadi chekuti maitiro acho ari otomatiki, zvinokurudzirwa tarisa mafaera akaiswa seakafanana, kuti tirege kuita mhosho inouraya.
Kana kamwe scan inoenderana yaitwa, iko kunyorera kunotiratidza ese mafaera akasarudzika nerudzi rwefaira, ichiratidza nzira yayo izere kuti tikurumidze kuwana dhairekitori iyo iripo kana tichida kuiwana. Mutengo weDuplicate Finder ndeye 9,99 euros asi kwemaawa mashoma inogona kutorwa mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya pazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Duplicate Finder, bvisa zvakapetwa mafaira nekukurumidza uye nyore
Mutemo wakatsanangurwa pamitero yaApple muEurope patafura
Safari Technology Preview 52 yakatoburitswa kare